ဓမ္မသစ်ကျမ်းသည်စုစုပေါင်းစာအုပ် ၂၇ အုပ်၏ဖွဲ့စည်းမှု၊ အများစုကိုတမန်တော်များရေးသားခဲ့သည်မရ။ ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏ဓမ္မသစ်ကျမ်းသည်ယေရှုကွယ်လွန်ပြီးနောက်ရေးထားသောစာအုပ်များနှင့်စာများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုသမ္မာကျမ်းစာ၏ခရစ်ယာန်တစ်ပိုင်းဟုလူသိများပြီး၎င်းတို့သည်နောက်ဆုံးပေါ်စာအုပ်များဖြစ်သည်။ အများစု ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်များသည်သခင်ယေရှု၏ဘဝနှင့်အမှုတော်ကိုဖော်ပြသည်ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုလူသိများသည် .ဝံဂေလိတရားကိုမရ။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းသည်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းမှ စ၍ Saint John ၏ Apocalypse ဖြင့်အဆုံးသတ်သည်။
ယနေ့ထိပင်အချို့သောကျမ်းဂန်များဘာသာပြန်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏အချို့သောအပိုင်းများတွင်များစွာအငြင်းပွားစရာဖြစ်နေသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏စာများနှင့်စာအများစုကိုဟေဗြဲသို့မဟုတ်အာရမိတ်ဘာသာဖြင့်ရေးထားသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုဘာသာပြန်သည့်အခါစာအုပ်များပြုလုပ်သည် မူရင်းကျမ်းအချို့၏အစိတ်အပိုင်းများကိုလွန်ကျူးပြီဟုအာမခံသောသူများလည်းရှိသည်မရ။ သို့သော်ကက်သလစ်ချာ့ချ်ကဲ့သို့သောခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ကြီးမားသောအကိုင်းအခက်များသည်ဤယူဆချက်များကိုငြင်းပယ်ပြီးအားလုံးကောင်းပါသည်ဟုဆိုကြသည်။ သို့ရာတွင်လူနည်းစုအချို့ကအခြားတစ်ဖက်မှတောင်းဆိုသော်လည်းခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်အများစုသည်စာအုပ် ၂၇ အုပ်စီ၏ဘာသာပြန်ချက်များကိုလက်ခံသည်။
1.1 ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၄ စောင်
ဓမ္မသစ်ကျမ်းသည်သခင်ယေရှုသေဆုံးပြီးနောက်ရေးသားခဲ့သောစာအုပ်စုစုပေါင်း ၂၇ အုပ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဤအရာသည်ခရစ်တော်၏ဘဝနှင့်အလုပ်၏ပုံပြင်များ၊ ခရစ်ဝင်ကျမ်းများနှင့် Saint John ရေးသားသော Apocalypse ကဲ့သို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းစာအချို့ဖြစ်သည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုခရစ်ယာန်အပိုင်းဟုခေါ်သည်၊ ၎င်းသည်ဤအပိုင်းမှ ပို၍ ဆက်စပ်မှုရှိသောယေရှုဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်အချို့သည် အခြားဘာသာတရားကိုးကွယ်သောဘာသာများသည်ဤကျမ်းသစ်များ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုအသိအမှတ်မပြုပါ.
ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၄ စောင်
ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်စုဆောင်းခြင်းသည်အစပြုသည် မဿဲ၊ မာကု၊ လုကာနှင့်ယောဟန်ရေးသားသောခရစ်ဝင်ကျမ်းလေးစောင်မရ။ သူတို့သည်မွေးဖွားချိန်မှသေဆုံးချိန်အထိရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုနာဇရက်မြို့သားယေရှု၏ဘဝနှင့်အလုပ်တို့ကိုပြောပြကြသည်။ အကျယ်ပြန့်ဆုံးဧဝံဂေလိတရားသည်လုကာအကြောင်းဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ဇာတ်လမ်း၏အစိတ်အပိုင်းကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခရစ်ဝင်ကျမ်းများသည်ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏အထင်ရှားဆုံးစာအုပ်များဖြစ်သည်မှာသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ သူတို့ကိုကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်၏အသက်နှင့်အလုပ်အကြောင်းပြောပြသောကြောင့်၎င်းတို့ကိုသမ္မာကျမ်းစာ၏အမြင့်မြတ်ဆုံးစာအုပ်များအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ဘုရားသခင်၏သားတော်သည်လူသားများအတွက်သူ၏အသက်ကိုမည်သို့ပေးသနည်း.
ခရစ်ဝင်ကျမ်းများပြီးနောက်ကျန်စာအုပ် ၂၃ အုပ်သည်ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်ပါဝင်သည်။ သူတို့သည်လည်းအလွန်သက်ဆိုင်ပြီးခရစ်ယာန်ဘာသာ၏အစောပိုင်းနှစ်များကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆက်စပ်ကြသည်။ နာဇရက်မြို့သားယေရှု၏တမန်တော်များအများစုရေးသားသောဤစာအုပ်များသည်ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုကယ်တင်ခြင်းဟုပြောကြသည်။ ၎င်းတို့အနက်ပထမ ဦး ဆုံးသည်ဤစာအုပ်သည်အသက်ဆိုင်ဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည် တမန်တော်များ၏လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်တမန်တော်ပေါလုရေးသားခဲ့သည်ဟုယူဆရသည်.
Saint Jude ၏စာ
သမ္မာကျမ်းစာ၏ဓမ္မသစ်ကျမ်းများသည်၎င်းတို့၏အလွန်ဆက်စပ်မှုကြောင့်လူသိများသည်။ ဒီစာအုပ်တွေကစလို့ သူတို့သည်မွေးဖွားချိန်မှသေဆုံးချိန်နှင့်နောက်ဆက်တွဲရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတွင်နာဇရက်မြို့သားယေရှု၏ဘဝနှင့်အရေးကြီးသောအဖြစ်အပျက်များကိုပြောပြကြသည်မရ။ ထို့ကြောင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာအတွက်ဓမ္မသစ်ကျမ်းသည်သန့်ရှင်းသောကျမ်းစာများတွင်အသန့်ရှင်းဆုံး၊ ခရစ်ဝင်ကျမ်းများကအရေးအပါဆုံးဖြစ်သည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်ယေရှု၏တမန်တော်များသည်ကမ္ဘာကြီးကိုခရစ်ယာန်ဘာသာအားကယ်တင်ခြင်းနည်းလမ်းအဖြစ်ပြသရန်ဖြတ်သန်းခဲ့သည့်အရာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပြန်ပြောပြသည်။ နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်များသည်ကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်တွင်မည်သို့ရှိနေနိုင်ကြောင်းနောက်ဆုံးမှတ်တမ်းအပြင်။
ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်များသည်အလွန်ခိုင်မာပြီးခရစ်တော်၏သတင်းစကားကိုတိုက်ရိုက်ပြောသောလက္ခဏာရှိသည်။ ဤအကြောင်းများကြောင့်ဤစာအုပ်များတစ်အုပ်စီသည်သမ္မာကျမ်းစာအတွင်းအလွန်ဆက်စပ်မှုရှိခဲ့သည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ကြီးကျယ်သောအကိုင်းအခက်အများစုသည်ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏စာအုပ်များကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးယေရှု၏ဘ ၀ အကြောင်းကိုအနည်းငယ်နားလည်ရန်နမူနာပုံစံများအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။ သမ္မာကျမ်းစာပါဤဓမ္မသစ်ကျမ်း ၂၇ စောင်တိုင်းတွင်ထူးခြားသောအထူးဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါရှိသည်။
ဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုလက်တင်ဘာသာမှအင်္ဂလိပ်၊ စပိန်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုရန်ရဲရင့်စွာကွပ်မျက်ခံရသည်ဟုဆိုရပေမည်။ အဓိကအားဖြင့်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းနှင့်၎င်း၏အပေါင်းအသင်းများ၏ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ ဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုဘာသာစကား ၂၀၀ ကျော်သို့ဘာသာပြန်ထားသည်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဤကျမ်းချက်များမည်မျှကျော်လွန်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်စေသည်။ ကက်သလစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအပါအ ၀ င်ခေတ်သစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ကြီးကျယ်သောဌာနခွဲများသည်ဘာသာပြန်ဆိုမှုများစွာကိုဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူသည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိဒေသအားလုံး၌ယေရှု၏ဘဝနှင့်အလုပ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုသိရန်အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာတရားများသည်သူတို့၏ဘာသာကိုလက်ခံသောဘာသာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ရန်သူတို့၏နောက်လိုက်များအား ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်အခြားဘာသာတရားကိုကိုးကွယ်သောသူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းလျှင်ပင်ကယ်တင်ခြင်းကိုရလိမ့်မည်မဟုတ်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်များသည်ပြစ်တင်ရှုံ့ချခြင်းမဟုတ်ဘဲကယ်တင်ခြင်းနှင့်ခွင့်လွှတ်ခြင်းအကြောင်းပြောသောကြောင့်အဓိပ္ပာယ်မဲ့သည်။ ဤပုံပြင်များသည်အခြားသူများထက်မည်သည့်ဘာသာကိုမျှမတည်ပါ၊ ကယ်တင်ခြင်းကိုရှာဖွေရန်နည်းလမ်းအဖြစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုပြောကြသည်။ ထို့ပြင်၎င်းသည်အဆင့်အတန်းရှိပြီးပရဒိသုသို့သွားရာလမ်းကိုရှာဖွေနိုင်စေရန်ယေရှုနောက်လိုက်ရန်သာအားပေးပါ။
categories ယဉျကြေးမှု လက်မှတ်အညွှန်း
ရောမဂဏန်းများသည် ၁ မှ ၁၀၀၀ အထိရှိသည်
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း » ယဉျကြေးမှု » ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်များ
စပိန်မှာလူ ဦး ရေအများဆုံးမြို့ ၁၅ မြို့
အင်္ဂလိပ်ဂဏန်း ၁ မှ ၁၀၀၀
မာယာဂဏန်း ၁ မှ ၁၀၀၀
၁ မှ ၁၀၀၀၀ အထိနံပါတ်များ
“ သမ္မာကျမ်းစာ၏ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်များ” တွင်မှတ်ချက် ၄ ခု
Sara Adilia တတိယ Jiron
7:2019 pm မှာဇန်နဝါရီလ 9, 55
လေ့လာလိုသူများအတွက် အလွန်ရှင်းလင်းပြီး အလွန်အသုံးဝင်သော အချက်အလက်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအချက်အလက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကျယ်ပြန့်စေပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏အစ်ကိုယေရှု၏နောက်လိုက်များအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြသနေပါသလား။
16:2019 pm မှာဖေဖော်ဝါရီလ 9, 02
12:2019 pm မှာဇူလိုင်လ 5, 23
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ ငါ့သခင်ယေရှုခရစ်အကြောင်းပိုသိလာရတာအရမ်းကောင်းတယ်၊ ဒါဟာဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုအများကြီးနားလည်ဖို့ကူညီပေးတယ်။
23:2019 pm မှာသြဂုတ်လ 3, 11